होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई डा.पाण्डेका १६ सुझाव - Unity Khabar
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई डा.पाण्डेका १६ सुझाव
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:४०
काठमाडौं : कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ । अस्पताल जान जोखिम मान्ने र अस्पतालमा शय्या नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
छरछिमेक घर परिवारको चासो राख्ने धेरै भएपनि संक्रमणको जोखिम लिएर काम गर्न निशेधाज्ञा र अन्य सिमितताका कारण कसैलाई पनि सहज छैन। यस परिस्थितिमा कतिपय मानिसले होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाएको पनि देखिन्छ। धेरैले यसरी आफूलाई ठिक भएको अनुभव समेत सार्वजनिक गरेका छन् । तर सबैलाई त्यत्तिकै ठिक हुन्छ भन्न सकिदैन।
होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले अगाडि सार्नु भएका सोह्र उपाय-
२. पल्सअक्सिमिटर (शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेशिन) बाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनु होला। यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ। पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँठो नजिक एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नुहोला। यसले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ। यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ।
४. अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहे वा खोकी लागिरहे, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नु होला। यो नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउँछ। तसर्थ नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसँग जाँच गराउनुहोला। छातीको एक्सरे वा सिटि स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि ( एन्टिभाइरल/एन्टिबायोटिक ) खानुपर्ने हुन्छ। कोभिड निमोनिया भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ।
५. जाँच नगरी घरमा अक्सिजन लिएर नबस्नु होला। अक्सिजनले रोग निको गर्दैन। चिकित्सकको सिफारिस अनुसारको औषधिले मात्र निमोनिया वा अन्य अवस्था ठिक हुन्छ। अक्सिजन उपचार हैन। धेरै व्यक्तिले घरमै अक्सिजन दिएर फोक्सो ड्यामेज भएको अवस्था पनि छ।
१५. दिनमा १ /२ पटक मात्र समाचार हेर्नुहोला। सामाजिक संजाल नहेर्नु होला। अनधिकृत समाचारले तनाव बढाउँछ।
(डा.पाण्डेको फेसबु्क पेजबाट साभार)
डडेल्धुरामा चैत २५ गतेदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान शुरु हुँदै
किन फर्फराउँछ आँखा?
अंकमाल गर्दा स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक
कस्तो रहन्छ आज तपाईको दिन? हेर्नुस राशिफल